Jeremia 34: 1-22
Jeremia 33 Jeremia 34 Jeremia 35
ary hianao tsy ho afa-mandositra ny tànany, fa ho voasambotra tokoa ka hatolotra eo an-tànany; ary ny masonao hahita ny mason'ny mpanjakan'i Babylona, dia hiteny mifanatrika aminao izy, sady ho tonga any Babylona hianao.
Nefa henoy ny tenin'i Jehovah, ry Zedekia, mpanjakan'ny Joda. Izao no lazain'i Jehovah aminao: Tsy ho fatin-tsabatra hianao,
fa amin'ny fiadanana no hahafatesanao, ary handoro zavatra ho fisaonana anao ny olona, tahaka ny nandoroany ho fisaonana ny razanao, dia ireny mpanjaka fahiny tany alohanao, ary hitomany anao ny olona hoe: Indrisy! ry tompoko; fa Izaho no efa nilaza izany, hoy Jehovah.
Dia nolazain'i Jeremia mpaminany tamin'i Zedekia, mpanjakan'ny Joda, tany Jerosalema izany teny rehetra izany,
fony ny miaramilan'ny mpanjakan'i Babylona mbola namely an'i Jerosalema sy ny tanànan'ny Joda sisa rehetra, dia Lakisy sy Azeka: fa ireo ihany no tanàna mimànda sisa tamin'ny tanànan'ny Joda.
Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah, rehefa nanao fanekena tamin'ny vahoaka rehetra izay tany Jerosalema Zedekia mpanjaka hitory fahafahana aminy,
Kanjo taorian'izany dia nanenina izy, ka naveriny indray ireo ankizilahy sy ankizivavy izay efa nalefany ho afaka ireo, dia nandevoziny ho ankizilahiny sy ankizivaviny indray.
Ary nibebaka hianareo andro-any ka nanao izay mahitsy eo imasoko tamin'ny niantsoanareo fanafahana, samy handefa ny rahalahiny avy; ary nanao fanekena teo anatrehako hianareo, dia tao amin'ny trano izay efa niantsoana ny anarako;
kanjo nivadika indray hianareo ka tsy nanamasina ny anarako, fa samy namerina ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny, izay efa nalefanareo handeha araka izay tiany, dia nanandevo azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny indray.
Koa izao no lazain'i Jehovah: Hianareo tsy nihaino Ahy ka tsy nety nitory fanafahana ho an'ny rahalahinareo sy ny namanareo avy; dia, indro, miantso fanafahana ho anareo kosa Aho, hoy Jehovah, nefa ho an'ny sabatra sy ny areti-mandringana ary ny mosary; ary hatolotro ho mpanjenjena any amin'[Na: ho fampangovitana.] ny fanjakana rehetra amin'ny tany hianareo.
Ary hatolotro ny olona izay nivadika ny fanekeko ka tsy nahatana ny tenin'ny fanekena, izay nataony teo anatrehako, fony nosasahiny ny ombilahy kely, ka nandeha teo anelanelan'ny tapany izy, --
dia hatolotro zo an-tànan'ny fahavalony sy eo an-tànan'izay mitady ny ainy; ary ho fihinan'ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny fatiny.
Ary Zedekia, mpanjakan'ny Joda, sy ny mpanapaka dia hatolotro eo an-tànan'izay mitady ny ainy ary eo an-tànan'ny miaramilan'ny mpanjakan'i Babylona, izay efa lasa niala taminareo.